မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: Mabaydar in the Wonderland with Bestie - Sydney day2(Ausi day 5)
Posted by mabaydar at 1:18 AM
Wow~~~~ ah yan kyite tal dei post ko :)
6/26/2013 8:59 AM
ခုလို ပုံများေ၀၂ဆာ၂နဲ့တကူးတက တပင်တပန်းပိုစ့်ရေးတဲ့မဗေဒါလေးကို အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပဏာမအနေနဲ့ ပြောကြားပါရစေ
(ဒါမှ နောက်ကျန်တာဆက်ရေးမှာ) လူလေးကလည်းချစ်စရာကောင်း ရှူခင်းတွေကလည်း အလွန်တရာလှ စားစရာတွေကလည်း စားချင်စရာကောင်း သူငယ်ချင်းများနဲ့ ပုံများကတော့ ကြည့်ရတာနဲ့ ကို အလွန်ပေါ့ပါးပျော်ရွှင်စရာကောင်းတာကြောင့် ဖတ်ရမြင်ရသူ ကြည်နူးဝမ်းသာမိပါကြောင်း နောက်ပိုစ့်များကိုလည်း အခုလို အားတဲ့အချိန်မှာ ဆက်ရေးပါလို့ တောင်းဆိုပါကြောင်း
ရုံးရောက်တာနဲ့ Postအရှေကြီးကို အစအဆုံးပြီးအောင် တထိုင်ထဲဖတ်လိုက်တယ်။ ARRRR…ခရီးသွားချင်လိုက်တာနော်။
အထူးဧည့်သည် သရုပ်ဆောင် ၂ယောက်ပါလို့ဖြစ်မယ်... :)
ပိုးပိုးကိုတော့ ဒီဘလော့လာဖတ်တဲ့သူတွေ ကျေးဇူးတင်သင့်နေပြီထင်တယ်။ မဗေဒါကို အနောက်ကနေ တွန်းအားပေးနေလို့လေ... ဟား. ဟား... ကွန်မန့်အတွက်ကျေးဇူးပါ.... ရေးမှာပါ.. နောက်ထပ် ၂ရက်ပဲကျန်တော့တယ်...
ဟုတ်တယ်... ခု မဗေဒါလဲ ခရီးအရမ်းသွားချင်နေတယ်... နောက်နှစ်မြန်မာပြည်ပြန်ဖို့ ခွင့်မရှိမှာစိုးလို့ စုနေရတယ်... Sighhh... ရုံးရောက်တာနဲ့ မဗေဒါလိုပဲ အင်တာနက်ကြည့်နေတဲ့ Shin ရှိလို့ သဘောကျမိပါ၏။ ဟိ ဟိ... အမြဲတမ်းအားပေးတဲ့အတွက်ရော... ကွန်မန့်ပေးတဲ့အတွက်ရော ကျေးဇူးတင်ပါ၏...
6/26/2013 10:26 AM
ဓတ်ပုံတွေမှာထဲမှာ မဗေဒါဝတ်ထားတဲ့ ဖိနပ်အနီရောင်လေးကို သဘောကျလိုက်တာ။ မဗေဒါရဲ့ The Rock နားက ဆိပ်ကမ်းလေးနဲ့ အမှတ်တရပုံမှာတော့ ဖိနပ်ပြောင်းသွားတာ သတိထားလိုက်မိတယ်။... :P
6/26/2013 10:32 AM
အဲဒါ Ruby က၀ယ်တာ... ၂ရံ ၃၀ နဲ့... Flat shoe လေးတွေ စီးပျော်ပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေခရီးသွားရင် အဲဒါက အပိုသယ်ရတာတွေပေါ့... ဖိနပ်အပိုလေ... ဟိ... ဓာတ်ပုံရိုက်ရင် ဒေါက်ဖိနပ်နဲ့ ပဲလုပ်ချင်တာကိုး။ မဗေဒါတို့ ညီအစ်မတွေ ဒီခရီးအတွက် ဖိနပ်သယ်လာတာ ၂ယောက်ပေါင်း ၆ ရံလောက်ရှိတယ်... မဗေဒါက ၃ရံ။ အစ်မကတော့ ၃ရံ အနည်းဆုံးပဲ (ဒိထက်များရင်တောင် များမှာ)... ဒေါက်နဲ့သာ တစ်နေကုန်လျှောက်သွားရင် အင်နာဂျီက double ကျမှာ။ အဲဒိဖိနပ်ကြီး The Rock က သစ်သားကြမ်းကြားညပ်သွားလို့ အရှက်ကွဲခဲ့သေး... ဟိဟိ
superwoman ကွ.... :D
အပျော်တွေ ဖတ်တဲ့သူဆီကိုတောင် ကူးတယ်.... :) :)
Thank you for your info about red shoe...:D ...I understand about bringing more than one shoe when traveling...hee hee...
ဟုတ်တယ်.. ဒီခရီးရဲ့ ထူးခြားချက်လေးက ငယ်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတူ ပျော်ခဲ့ရတဲ့ အမှတ်တရလေးတွေကြောင့်လဲပါတယ်... စူပါမန်းရဲ့ ချစ်သူဖြစ်ရင်တော့လဲ ကောင်းသားနော်.. အသွင်တူတော့ အိမ်သူဖြစ်လို့ရတာပေါ့...
ပုံတွေအရမ်းလှတယ် မဗေဒါရေ ဝတ်ထားတဲ့ ဂါဝန်လေးနဲ့ ဘလေဇာလေးလဲလှ
ပြီးတော့သူက ဒေါက်ဒေါက်ကြီးလဲ ဒါ့ပုံရိုက်ကာနီး လဲစီးသေးတယ် အရမ်းမိုက်း)
တနေကုန်လည်ထားပေမယ့် မျက်နှာလေးက bronzer လား highlighter လားမသိ ပြေပြေလေးနဲ့ ဘူးတီးဖိုးးးး
ဂါဝန်လေးက Brisbane မှာဝယ်လာတာ AUD 10 ပဲ... အရမ်းတော့ မကောင်းဘူး... ကျယ်သီးတွေက ချောင်ပြီးပြုတ်ပြုတ်ထွက်တယ်... ဒီဇိုင်းလေးကြိုက်လို့ ဓာတ်ပုံရိုက်ရအောင်ဝယ်လာတာ... ဓာတ်ပုံရိုက်ခါနီးမှ ဒေါက်ဒေါက်ကြီး ထုတ်ဝတ်တာ ဘိုသိ? :P ... ဟီး...
မိတ်ကပ်က မနက်ကတည်းက ၁ခါပဲ ကရင်ပတ်ပြန်ရိုက်ဖြစ်တယ်။ ဆစ်ဒနီတာဝါမှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မတွေ့ခင်ပေါ့... မနက်ကတည်းက မိတ်ကပ်လိမ်းထဲ moisturizer ခံလိမ်းပြီး BB cream ရယ်၊ နောက်ပြီး highlight လုပ်သင့်တဲ့နေရာလေးတွေမှာ Concealer ထည့်တယ်. ပြီးတော့ ကရင်ပတ်ရိုက်လိုက်တယ်။ မျက်လုံးကိုတော့ Green pallet လေး... Brand တောင် မဟုတ်ပါဘူး... Brand မဟုတ်ပင်မဲ့... တစ်ချို့ Brand ဟာတွေထက်တောင်ကောင်းတယ်... အဲဒါကို smoky eye ချယ်လိုက်တယ်... မျက်တောင်တုတပ်ထားတယ်... တစ်နေကုန် ထပ်ထိလို့မရဘူး... ဒီတိုင်းပဲ... နှုတ်ခမ်းနီကိုတော့ ပြေပြေပဲဆိုးတယ်... ဟီး... အဲဒိတစ်မျိုးပဲ ပြင်တတ်တာ... :P ... ကွန်မန့်ပေးလို့ မဗေဒါရဲ့ လှို့ဝှက်မိတ်ကပ်ပြင်နည်းကို ပြောပြတာ... :)
7/01/2013 3:17 PM
ငှက်တွေကိုအစာမကျွေးတာအကောင်းဆုံးပဲ။ လူတွေစားတဲ့အစာနဲ့သူတို့တွေနဲ့မတည့်ဖြစ်ပြီး သေကုန်၊ တစ်ခုခုဖြစ်ကုန်ရင် ကိုယ့်ကိုတရားဆွဲလို့ရတယ်တဲ့။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကလူတွေ၊ ရဲတွေနဲ့ တွေ့ရင်ဒဏ်ရိုက်တတ်တယ်တဲ့။ ကိုယ်လည်းစိတ်ကောင်းဝင်ပြီး ကျွေးမိလို့ သူငယ်ချင်းကရှင်းပြတာ
7/02/2013 1:02 AM
Happy time lay ko pyan tha thei yal dei post lay ko pyan read yin ~~:)
cool!! love to read your post as usual :)
Cool!!! love to read your post as usual :)
မရောက်ဖူးသေးတဲ့ နေရာတွေကိုလည်းရောက်ဖူးသွားပြီ မဗေဒါရေ... :)
တော့ ကျွန်တော်တို့လို မရောက်ဘူးတဲ့သူတွေအနေနဲ့ ဗဟုသုတတွေတော်တော်
တိုးပါတယ် မဗေဒါရေ... လာမယ်...လာမယ်နဲ့မရောက်ဖြစ်ခဲ့တာပါ...ဒီနေ့တော့
မှတ်မှတ်ရရ ရောက်အောင်လာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ... ပို့စ်လေးဖတ်ခွင့်ရလို့ကျေးဇူး
တင်ပါတယ် မဗေဒါရေ... ကျွန်တော်အရမ်းကြိုက်တဲ့ဆရာဇော်ဂျီရဲ့ ဗေဒါလမ်း
ကဗျာစုတွေထဲက မဗေဒါက ချောင်းတွေထဲမှာသာ စုန်ဆန်မြောနေတဲ့ ဗေဒါ...
အခုဘလော့ရေးနေတဲ့ မဗေဒါ ကတော့ ကမ္ဘာပတ်နေတဲ့ ဗေဒါ နော်... :)
လာရောက်အားပေးပြီး ကွန်မန့်မှာ အမှတ်တရ ခြေရာချန်ပေးခဲ့တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုရာဇာထွေးရေ...
7/06/2013 12:27 AM
မဗေဒါရယ်..လာဖတ်သွားပါတယ်..ဒီပိုစ့်မှာတော့ ကော့မက်တွေအများကြီးပဲ..း) အားပြည့်သွားလောက်ပြီ စာတွေအများကြီးရေးနော်..
comment အခု ၂၀ရှိရင် ၁၀ခုက အစ်မ reply တွေပါညီမရယ်.. ဟိဟိ...
ရေးတာတော့ရေးမှာပါ... ခု နောက်ရက်ရေးနေတာ နည်းနည်းတော့ ခရီးရောက်ပြီ... လာလည် အားပေး အားဆေးကျွေးသွားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါနော်...
8/31/2013 12:17 AM
8/31/2013 12:31 AM
ဘယ် browser နဲ့ ဖတ်လဲမသိဘူး... Chrome နဲ့ ဖတ်ကြည့်ပါလားဟင်... အမှန်တော့ မြန်မာဖောင့်မရှိတဲ့ ကွန်ပြူတာတောင် ဖတ်လို့ရအောင် လုပ်ထားတာ... ဘာလို့ ဖတ်လို့မရလဲမသိဘူး... ဖုန်းကနေ ဖတ်လို့တော့ မရဘူးထင်တယ်...
8/31/2013 5:36 PM
google နဲ့ သုံးတာ phone နဲ့ သုံးတာတခြားဟာတွေဖတ်လို့ ရတယ်ဒီ post ကဖတ်လို့ မရတာဖတ်လို့ ရအောင်တင်ပေးလို့ မရဘူးလား internet journal ထဲမှာတွေလို့ ဝင်ကြည်တာအားကြလိုက်တာဗျာ*********
9/03/2013 12:44 AM
ဒီ Post တစ်ခုပဲ ဖတ်လို့မရတာလား? သြစီ Day4blue mountain သွားတဲ့အကြောင်းကျတော့ ဖတ်လို့ရလား? ဖုန်းနဲ့ဆိုရင်တော့ စာလုံးတွေမှန်မှာမဟုတ်ဘူး... နောက်ပိုင်းတော့ ဖုန်းနဲ့ပါကြည့်လို့ရအောင် လုပ်လို့ရရင် လုပ်ဖြစ်မှာပါ.. ခုလောလောဆယ်တော့ computer က Chrome browser နဲ့ကြည့်ရင် ပိုအဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်.. မဗေဒါ စမ်းကြည့်တာတော့ firefox တို့ IE တို့နဲ့တောင် ဖတ်လို့ရပါတယ်... မြန်မာဖောင့် ကွန်ပြူတာထဲမှာ မရှိတာတောင် ဖတ်လို့ရပါတယ်... အင်တာနက်ဂျာနယ်ကနေ ရောက်လာတဲ့အတွက်လဲ အများကြီး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. နောက်လဲ စိတ်ဝင်စားရင် လာရောက်ဖတ်ရှူအားပေးပါနော်...
9/03/2013 5:36 PM